Anemone nemorosa: foto, nkọwa, dị mma, nlekọta, bara uru njirimara - Mkpụrụ ubi - 2020
Anemone (anemone) oakwood
Anemone nemorosa, ma ọ bụ, dịka a na-akpọkwa ya, anemone, bụ osisi nke a na-ejikarị na nkà mmụta ọgwụ mee ihe maka ọgwụgwọ maka ọtụtụ ọrịa. Okpoko osisi ahụ ji nwayọọ nwayọọ na-apụ n'anya, n'ihi ya, e tinyere ya na Red Book. Nke a bụ n'ihi n'eziokwu na o nwere àgwà ndị mara mma, nke mere na ọ na-emekarị ka ọ kwụsị. Ma ebe ọ bụ na ifuru dị nnọọ njọ, mgbe e mebisịrị ya, usoro mgbọrọgwụ ahụ daa. O yiri mmiri ozuzo, ebe ọ na-ele anya dị nwayọọ ma na-atọ ụtọ ma na-agbanye ọbụna site na ifufe na-adịghị ike. Ọ na-amalite oge ntoju na mmalite oge opupu ihe ubi ma bụrụ ihe ịrịba ama nke mmalite nke ezigbo okpomọkụ. Ọzọ n'isiokwu a, anyị ga-elebakwu anya na Dubravnaya anemone, nye nkọwa nke njirimara mpụga na foto ma gwa gị otu esi eto eto mmiri a dị ebube n'ụlọ.
Ịhọrọ ebe na-eto eto
Anemone nwere steam ogologo, nke nwere ike itolite ruo 20 cm n'ịdị elu. A na-ekewa akwụkwọ ahụ n'akụkụ atọ. Na njedebe nke osisi ahụ, a na-akpụ otu ifuru ọcha, mgbe ụfọdụ, a na-ahụ ntụ oyi na agba chaa chaa.
Anamone okooko osisi na-enwekarị petals isii. Osimiri na-eme n'April ma na-adịgide ruo mgbe May. N'ọnwa June, a malitere mkpụrụ osisi, nke nwere ọtụtụ mkpụrụ n'ime igbe mkpụrụ. Taa, e nwere ọtụtụ osisi oak anemone nke nwere ike itolite n'ubi ubi. Osisi ndị a nwere ike icho mma lawn na akwa akwa.
Ụfọdụ iche dị iche iche na okpukpu abụọ. Buds nwere ike ịbụ odo odo, acha anụnụ anụnụ na ọbụna uhie. Ọ bụrụ na ị na-enye nlekọta kwesịrị ekwesị nke osisi, ọ nwere ike ịmalite ntoju n'afọ atọ nke uto na ebe ọhụrụ.
Anemone makwaara maka ihe ngwọta ya, ekele nke e ji mee ya na nkà mmụta ọgwụ.
Mkpuru anmone mgbatị na-agbasapụ. Na nke a, a na-etolite ọtụtụ obere osisi ndị na-eto eto.
Ọ bụrụ na ịnweghị igbochi osisi ahụ, ọ ga-emepụta nnukwu ọmarịcha ifuru osisi mara mma. N'ime iri afọ ole na ole nke ọkọchị, akụkụ nke dị n'elu ala nwụrụ.
Osisi bụ anemone nke oké ọhịa bi n'ime oke ọhịa nke Mediterranean, Western Europe na Europe nke Russia. Anemone na-agbasa na ụdị anụ ọhịa dị iche iche, na-adịkarịghị na spruce-leaved. Ọ bụrụ na a hụrụ ifuru ahụ n'ọhịa spruce, nke a ga-abụ ihe akaebe na oaks na-etolite ebe a, nke e mesịrị jiri osisi fir edochi.
Ị ma? Aha anemones na Grik pụtara "nwa nke ifufe". Ozugbo a kwenyere na okooko osisi anamone na-emeghe ma na-emechi ya n'ihi ọrụ nke ifufe. N'ezie, ka oge na-aga, ekwenyeghị na nkwupụta a, mgbe e mechara hụ osisi ahụ. Taa, a kwenyere na aha ifuru ahụ bụ n'ihi fragility na uche ya. Ọbụna n'obere ikuku nke ikuku ahụ, osisi ahụ na-esi n'otu akụkụ gaa n'akụkụ, na petals nke okooko osisi na-amalite ịkụgharị na ọ pụdịrị ime ka ọ daa.
Maka ịme ihe anemone nke dị mma maka ọdịdị ya, nakwa oge na oge nke okooko osisi. Ifuru na-enye ya mma mgbe ndị ọzọ ornamental osisi n'ime ubi na-eteta mgbe wintering. Tụkwasị na nke ahụ, anemone bụ ihe dị mma, nke na-enye ya ohere ime ka anya nke onye na-akwa ákwà ruo afọ iri, na ọbụna karịa. Ihe mgbakwunye dị mma bụ eziokwu na anemone na-eguzogide ọrịa na pests. Nke a bụ n'ihi eziokwu ahụ bụ na ifuru bụ nsi na ọ gaghị atọ ya ụtọ dị ka ahụhụ dị iche iche na ụmụ ahụhụ dị iche iche.
Anemone nemorosa ifuru na-ahọrọ ìhè, mana ntakịrị oghere nke ogige. Igosipụta ya na ịchacha kpọmkwem ìhè anyanwụ adịghị adaba ya. Nhọrọ kachasị mma ga-abụ ebe n'okpuru okpueze niile nke osisi. Ọ na-achọsi ike inye ala nke ájá, mmiri na humus. N'otu oge ahụ, ọ dị mkpa ịnọgide na-ekpo ájá n'oge dum, ọbụna mgbe akụkụ elu nke osisi ahụ anwụọla. Ọzọkwa, ala ahụ kwesịrị ịhapụ ma na-eme nri.
Ị ma? Na akụkọ ifo nke Gris oge ochie, a kwenyere na anemone - ndị a bụ anya mmiri nke Aphrodite. E nwekwara akụkọ ntụrụndụ nke a na-akpọ Adonis ọbara.
N'ụlọ, ịmalite mkpụrụ anemone site na mkpụrụ ga-esi nnọọ ike. Ya mere, ọ ka mma ịchọta usoro nke ịkewa ohia. Mgbe egwu ala, osisi ga-ekewa nke ọma. A ghaghị ime nkewa na July, mgbe ọ bụghị akwụkwọ niile ga-anwụ. Mgbe ị na-akụ, ọ dịghị mkpa ime ka okooko osisi ahụ dịkwuo ala, n'ụzọ dị omimi nke ihe dị ka 5 cm, kachasị - 8-10 cm. Ịgbara osisi ugbu a abụghịkwa ya.
Nakwa n'usoro nke ịgha mkpụrụ osisi dị mkpa ka ị hụ na agbụrụ siri ike dị na ala. Anemone na-adịkarị mfe ịnweta ebe ọhụrụ ahụ.
Ọ bụrụ na e kpebiri ịgha mkpụrụ ahụ, ọ dị mma ịme nke a tupu oyi. A na-ekwekwa ịgha mkpụrụ mmiri, ma ọ bụ nanị na ememe nchekasị nke mbido. A pụrụ ịhụ seedlings mbụ na 15-20 ụbọchị. Mkpụrụ osisi nwere ike inye okooko n'afọ nke abụọ.
Anyị na-adụ gị ọdụ ka ị mụta otú e si eto anemone n'ọhịa.
Ọ dị mfe ilekọta osisi ọhịa a edepụtara na Red Book.
Ihe mbụ ị ga-ekwu gbasara ịgbara mmiri. Ọ dị ezigbo mkpa iji moisturize ala n'okpuru osisi n'oge ahụ mgbe ọ na-eto eto nke okooko osisi, nakwa na ha na-eto eto. N'otu oge ahụ, anyị ekwesịghị imepụta ahịhịa, n'ihi na mgbọrọgwụ nke anemone dị nnọọ nso. Wepu ata ah u mgbe mmiri dikwasiri n'ala kpamkpam, a ghaghi ime ya na aka ya ma jiri nlezianya buru oke oke.
Ọ dị mkpa! Ọ dị mkpa iji nyochaa ọnọdụ nke ala, ebe ọ bụ na oke mmiri na waterlogging ga-eme ka rotting nke mgbọrọgwụ na tubers nke oakwood anemone.
Ndị na-eto eto ọkachamara na-akwado mulching ala gburugburu anemones na epupụta dara. N'ụzọ dị otú a, ọ ga-ekwe omume ijigide mmiri mgbe ịmịchara mmiri ruo nwa oge, na inyekwa osisi ndị ọzọ nri.
O kwesịkwara ịmara na mmiri ozuzo ndị ahụ na-eguzogide na-adịgide adịgide, ya mere, ọ bụrụ na onye na-elekọta ubi agaghị enwe ike ịkụcha okooko osisi n'onwe ya, ha nwere ike ọ gaghị enwe mmiri site na mmiri ozuzo. Ọ ga-adị mkpa iji zụọ osisi na nri otu ma ọ bụ afọ abụọ mgbe ọ kụrụ. N'okwu a, a naghị anakwere iji nri, ebe ọ bụ na ọ ga-abụ ọdachi maka anụ ọgbụgba.
Organic mmiri fatịlaịza kacha mma. Mee ha ka ha nọrọ n'osisi okooko osisi budding.
N'ihe banyere nri na-edozi ahụ, a na-emepụta ha na ogbo okooko anemone. Ma, ọ gaghị ekwe omume ka ọ "gabiga" okooko osisi, ebe ọ bụ na nke a, ha ga-efunahụ buds.
Maka oge oyi, ọ ka mma igwu ala anemone ma tinye ya n'ime ihe eji etinye ya na ájá ma ọ bụ peat. A ga-echekwa igbe ndị a n'ọchịchịrị ma dị jụụ, dịka ọmụmaatụ, na okpuru ulo ma ọ bụ okpuru ulo. Site n'oge ruo n'oge, mmiri ma ọ bụ ájá ga-achọ ka mmiri mee ka osisi ahụ ghara ịkụ. Ọ bụrụ na ndị a kụrụ osisi adịghị ezubere ka a gwupụta, mgbe ahụ, ha ga-mkpa ka a fesa na ájá, peat na compost, na kpuchie ya na epupụta n'elu.
Ná mmalite oge opupu ihe ubi, a ga-ewu ụlọ griin na klas ahụ, nke ga-enyere aka ịme ka ome nke ome ọhụrụ.
N'ihi eziokwu ahụ bụ anemone osisi nwere nnukwu vitamin C, saponin, alkaloids, mmiri ọgwụ acid na ihe ndị ọzọ, osisi ahụ nwere ọtụtụ ihe ngwọta.
Ntughari. Enwere ike imetuta mmetụta dị iche iche na ọkwa dị iche iche.
Sedative. Ọ soothes na-enwekwa mmetụta antispasmodic.
Painkiller Wepu ma ọ bụ belata ihe mgbu.
Na-atụ anya. Na-ebelata viscosity nke sputum ma na-enyere ha iwepụ ngwa ngwa.
Bactericidal. O nwere ike imebi ihe nke oria ojoo di iche iche.
Mmiri. Na-eme ka ike mmadụ nwee ike ịṅụ salts na toxins.
Dabere na ụdị ọgwụgwọ dị iche iche nke anaemones, ha na-etinye aka na ọgwụ maka migraine, eczema, rheumatism, dermatitis, ọnyá purulent, gout, yana adịghị ike mmekọahụ nke ndị inyom na ndị ikom.
Ị ga-enwe mmasị ịmụta banyere ịkụ mkpụrụ nke ornamental osisi dị ka afọratum, ala ike, jascoli, ụra, ugwu, perilla.
Mana n'otu oge ahụ ọ dị mkpa icheta na anemone dị ọcha bụ nsi! Jiri ọgwụ ọjọọ eme ihe na osisi dị otú ahụ, yana iji tinctures sitere na nkume dị mkpa ọ bụ nanị mgbe ị gụsịrị dọkịta na njedebe ole na ole.
Anemone maka iji ihe ndi ozo na achikota na ogbo nke okooko ya, wee kpoo ya na ebe ozo di n'okpuru onodu uzo onodu ihe kariri 40 Celsius. Mgbe nke ahụ gasịrị, a pụrụ ịchekwa osisi a mịrị amị n'ihi na ọ bụghị ihe karịrị otu afọ na ite iko.
Ọ dị mkpa! E kwesịghị iji ụmụ nwanyị na-eme ihe na-emetụta ụmụaka mgbe ha na-atụrụ ime (nsogbu na-emetụ ha n'ahụ), yana mgbe a na-agba ha ụra. Ọzọkwa, emela ihe na-eme ka ọ ghara ịmịkọrọ akụrụ.
Tinyere ihe ndị ọzọ, anamone osisi oak na-adọrọ nnọọ mmasị maka ndị na-aṅụ beekeepers. Nke a bụ eziokwu ahụ bụ na ihe na-esi ísì ụtọ nke anemone nwere ike ịdọta ọtụtụ ụmụ ahụhụ, gụnyere bekee.
A na-ewere Anemone nemorosa dị ka mmiri nke mmiri na-adịghị. Ọ dị nro ma na-emebi emebi, mana n'otu oge ahụ ọtụtụ ndị na-eto eto hụrụ ya n'anya nke ukwuu. Ọ dịghị achọ nlekọta pụrụ iche, n'ihi ya, ọbụna onye na-elekọta ihe ubi nwere ike ịmalite ya n'ubi ya.
Nkọwa: atụmatụ nlekọta ụlọ
Enwere ike ichebe carrots na mbara ihu na oyi na otu esi eme ya n'ụzọ ziri ezi? Nkọwa nke ụzọ dị iche iche
Tomato mama nne na nna: nke ọma, nke ukwuu
Ụlọ ụlọ si Denmark: Aphelandra bulging ma ọ bụ Squarrosa
Bara uru ma na-emerụ ọbara ọbara
European swimsuit: ọdịda ma na-elekọta
Iji ash dịka fatịlaịza
The ndekọ maka arụpụtaghị - piom iche "Anna Shpet"
Mkpụrụ mara mma maka uto ọ bụla - Altai tomato uhie, pink, oroma
Ihe mgbochi a na-agba mgba nke May na oke ya
Chinese na-ese quail: atụmatụ nke ịzụlite n'ụlọ